Dr. Taleb Rifai oku ngwa ngwa gaa na mba ndị otu UNWTO na-azaghachi Council Executive na akwụkwọ ozi mepere emepe ọhụrụ.
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » WTN » Dr. Taleb Rifai oku ngwa ngwa gaa na mba ndị otu UNWTO na-azaghachi Council Executive na akwụkwọ ozi mepere emepe ọhụrụ.
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Mgbasa Ozi • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • WTN
The Kọmiti na-akwado ndị njem nlegharị anya nke ụwa dị nnọọ bipụtara ọhụrụ oghe leta Dr. Taleb Rifai, bụbu Secretary General nke UNWTO.
Akwụkwọ ozi a bụ nzaghachi leta oghe ụnyahụ nye mba ndị otu onye isi oche UNWTO Executive Council si Chile.
Akwụkwọ ozi a na-agba ndị otu UNWTO ume ka ha lelee arụmụka niile n'okwu a edepụtara n'akwụkwọ ozi ya.
Gụọ akwụkwọ ozi Dr.Rifai
Ezigbo ndị ọrụ ibe na ndị enyi,
Ọ bụ ihe obi ụtọ dị ukwuu na emechara m nweta nzaghachi nye akwụkwọ ozi nkwonkwo mụ na Francesco Frangialli bịanyere aka na ya, ka na Disemba 2020, na oge ntuli aka UNWTO nye onye odeakwụkwọ ukwu, ana m ekelekwa Onye isi oche nke Council maka ya. Ị nwere ike icheta na n'akwụkwọ ozi anyị, anyị tụrụ aro ka Secretariat tụgharịrị uche maka oge Jenụwarị 2021 maka Council Executive 113 na-esote mgbanwe n'ụbọchị FITUR site na Jenụwarị ruo Mee 2021.
Enweghị m ike ịnabata ma nwee ekele maka okwu nke Hon. Onye isi oche nke Kansụl na a na-ahụ maka iwu kwadoro na mkpebi nke otu 112 na 113 Council Council. Mmesi obi ike ya na-akasi obi, ọ bụ ezie na ọ dịghị mgbe anyị na-ama aka na iwu kwadoro nke otu mkpebi nke ọ bụla: a na-ekwu okwu anyị site n'echiche sara mbara nke ịhụ na izi ezi nke usoro ahụ dum.
Ka anyị tụgharịa:
Na Septemba 2020 na Council Executive 112 na Tbilisi, Georgia, Council Executive kpebiri ijide ya 113th nnọkọ na Spain na Jenụwarị 2021, n'ime usoro nke FITUR, ụbọchị ndị obodo ga-akwado ya. 1.
N'otu nzukọ ahụ, Kansụl ahụ kwadokwara usoro iheomume maka usoro ntuli aka, na njedebe nke ntinye akwụkwọ ntinye akwụkwọ ọnwa abụọ site na ụbọchị EC, ya bụ Nọvemba 18, 2020, 2.
Otu ọnwa ka ọgbakọ ndị isi 112 gachara, na Ọktoba 2020, Spain kwupụtara na ebigharịrị FITUR na Mee 2021 n'ihi ọnọdụ ndị na-emepe emepe. N'akwụkwọ akụkọ a, ndị bịara nzukọ nke FITUR na-ahazi kọmitii nke UNWTO Secretary General Pololikashvili nabatara 3. N'ụzọ dị mwute, mkpebi nke Council na jide nnọkọ 113 EC n'ime usoro nke FITUR, na ụbọchị a ga-akwado, esoghị ya.
Na-esote oge ngwụcha maka ngwa na Nọvemba, UNWTO nyere na Nọvemba 23 nke ndetu okwu nye ndị otu na nnata mmadụ abụọ. Dabara Candidatures 4. N'ụzọ dị mwute, ndokwa a kwadoro na 112 EC iji gwa ndị òtù site na December 15th nke natara Candidatures erubeghị. Ọzọkwa, ọ dị ka n'ụzọ dị mwute, a jụrụ ihe ruru mmadụ isii n'ihi na ha enwebeghị ike ịnye ha n'uju site na njedebe.
Ọ bụ n'oge ahụ, na December 2020, na ọnụ na Francesco Frangialli, anyị na-atụ aro ka UNWTO obodo chegharịa oge nke 113 Executive Council 5. Anyị na-marakwa na ijide ya na Jenụwarị ụbọchị ga-akpalite a mmebi nke Financial Regulation 14.7 6. , dị ka ihe nwute mere.
Kansụl ndị isi 113 mere dịka ahaziri na mbụ na Jenụwarị 18 na 19, 2021, ebe onye ndoro-ndoro ochichi ọzọ nwere obere oge ma e jiri ya tụnyere onye na-achị achị iji mee mkpọsa dị irè. N'ezie, na mmemme mmekọrịta ọha na eze nke UNWTO kwadoro na mgbede nke kansụl ahụ, kwuru na onye na-eme ntuli aka na-akwa ụta emeghị mkpesa maka enweghị ohere nha anya na mgbasa ozi ahụ.
Ezigbo ndị enyi m, ọ dịghị mgbe m rụrụ ụka na mkpebi Kansụl ezighi ezi. Dị ka Francesco Frangialli si tinye ya na nso nso a, iwu ezughị oke. N'ịgbanwe usoro a, ị nwere ike ịbụ ma iwu na omume rụrụ arụ 7.
A na-ekwu na ngalaba agụmakwụkwọ na ọ bụrụ na nwa akwụkwọ daa, ọ bụ nsogbu nwa akwụkwọ; ma ọ bụrụ na klas ahụ dum daa, ọ bụ onye nkụzi kpatara ya. Kedu ihe ị ga-ekwu mgbe njedebe maka ngwa dị mkpụmkpụ nke na ihe ruru 6 n'ime 7 enweghị ike ịkwado ya n'oge? Ma ọ bụ ihe kpatara eji gbochie ozi a gbasara ntuli aka ndị a jụrụ ajụ n'aka ndị otu, ọ bụrụgodị na Kansụl ahụ rịọrọ maka ozi ya ndị ntuli aka natara a ga-ekesa?
Kedu ihe ị ga-ekwu mgbe naanị onye ọzọ ga-ahapụ na-eche oge na-agaghị ekwe omume na mkpọsa ahụ, ọtụtụ n'ime ya site na oge ekeresimesi na afọ ọhụrụ mgbe nchịkwa njem nleta na-emechi maka afọ ahụ?
Ihe ị ga-ekwu mgbe odeakwụkwọ ukwu gara nzukọ kọmitii na-ahazi FITUR nke gbanwere ụbọchị site na Jenụwarị ruo May ma ọ dịghị ihe ọ bụla iji gbanwee ụbọchị Council. n'ime usoro FITUR dị ka Council nyere iwu?
Kedu ihe ị ga-ekwu mgbe odeakwụkwọ ukwu hapụrụ ụbọchị Jenụwarị maka Council na ọ maara na ọ ga-emebi Iwu Ego site n'ime ya?
Ihe ị ga-ekwu mgbe onye ọrụ ụkpụrụ omume kwupụtara onwe ya 8ya na-eto eto nchegbu na mwute na a kwụsịrị na mberede omume ndị gara aga na-ahapụ ohere zuru oke na opacity na njikwa aka ike?
N'ime akụkọ nwere nghọta, ngalaba nyocha ọnụ nke United Nations 9 dọrọ ndị otu aka na ntị banyere ntuli aka nke ndị isi ụlọ ọrụ mgbe onye ndoro-ndoro ochichi n'ime na-azọ ọkwa ahụ ga-eso: Ndị na-azọ ọkwa n'ime na-azọ ọkwa onyeisi oche nwere ike iji ma ọ bụ mebie ọrụ ha na akụrụngwa ha (dịka kọntaktị, njem, ụlọ ọrụ, ndị ọrụ, wdg) iji jeere mkpọsa nke ha. Ọ bụghị naanị na ọnọdụ a ga-abụ nke na-adịghị mma kamakwa ọ ga-ebute ohere na-ahaghị nhata n'etiti ndị na-aga ime ime na n'èzí ma nwee ike iduga na nkewa ndị ọrụ.
N'ezie ndị nyocha ahụ nwere oke nchegbu maka ohere ahụ, ha mechara gbakwụnye: Omume dị otú ahụ, n'ihi ndị nyocha, kwesịrị ka a na-ewere ya dị ka iwu na-akwadoghị na nke na-adịghị mma, ma bụrụ ndị a na-ama ikpe. Ọ bụrụ na ebubo onye ndoro-ndoro ochichi n'ime ma ọ bụ onye na-eme nke ọma na mpụga nke ọma maka omume ndị dị otú ahụ, ha kwesịrị idobe nyocha na usoro ịdọ aka ná ntị..
N'imegide ndabere nke a, Council Executive 113 nyere ndụmọdụ maka nhọpụta nke odeakwụkwọ ukwu, nke ị nwere n'ihu gị. Ọ bụ ugbu a oge maka gị n'ihi arụmụka niile, na echiche ị nwere maka onye nyocha, ịtụ vootu ma ọ bụ ịtụ vootu megide. Ị nweere onwe gị ime ya n'ụzọ ọ bụla na usoro ịtụ vootu kwesịrị ikwe nkwa nzuzo gị: Ọdịnihu nke nzukọ a dị n'aka gị.
Ekele dịrị m unu niile.
Mgbakwunye na CE/112/6 Mkpu 1. https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/CE112_06_Procedure_SG_elections_2022-2025_rev1_En_0.pdf
Paragraf nke 5 OA/113/4. https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/CE113_04_Recommendation_nominee_post_Secretary_General_2022_2025_En_0.pdf
Iwu 14.7 gbasara ego: Site na 30 Eprel kwa afọ, odeakwụkwọ ukwu ga-edo onwe ya n'okpuru Kansụl akwụkwọ ndekọ ego nyocha nke afọ ego gara aga. https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422319
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2009_8_English.pdf e hotara paragraf nke 77 na 87 (akụkụ).
Birgit Trauer ezigara na World Tourism Network WhatsApp Group:
Oku a maka nghọta na nchegbu ụkpụrụ omume, n'uche nke m, na-egosipụta ezi ebumnuche na ntinye aka nke ọma iji hụ na nsonye, ​​izi ezi, na ọrụ omume nke na-akwado 2021 United Nations 'elekwasị anya na udo na ntụkwasị obi. Daalụ Dr. Taleb Rifai.